Neymar Oo Cadeeyay In Messi Iyo Isaga Ay Isku Koox Ka Ciyaarayaan Sanadka Danbe
HomeHoryaalka SpainNeymar oo cadeeyay in Messi iyo Isaga ay isku koox ka ciyaarayaan Sanadka Danbe
December 3, 2020 Horyaalka Spain, Horyaalka France, Wararka Ciyaaraha 0
Weeraryahanka Paris Saint-Germain Neymar ayaa dabka ku sii shiday wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan mustaqbalka Lionel Messi isagoo sheegay inuu doonayo inuu la midoobo saaxiibkiisii ​​hore ee Barcelona xilli ciyaareedka soo socda.
Messi ayaa ku dhawaaday inuu ka tago Camp Nou xagaagii ka hor intii uuna ka laaban go’aankiisa kadib muran ka dashay heshiiskiisa laakiin xiddiga 6-da jeer ku guuleystay Ballon d’Or ayaa haatan ku jira sanadkii ugu dambeeyay ee heshiiskiisa kooxda Barcelona.
PSG ayaa ka mid ahayd kooxaha lala xiriirinayay inay u dhaqaaqayso Messi, halka Neymar sidoo kale lala xiriirinayay inuu ku laabanayo Barcelona bilihii la soo dhaafay.
Xiddiga reer Brazil ayaa haatan si maldahan u sheegay in mid ka mid ah xaaladahaas ay dhici karto, isagoo yiri:”waxa aan aadka u doonayo ayaa ah in aan mar kale ka garab ciyaaro Messi si aan isaga ugu garab raaxaysto ciyaarta mar kale”ayuu u sheegay ESPN.
“Wuu ka ciyaari karaa booskeyga, wax dhibaato ah kuma qabo taas! Laakiin waxaan doonayaa inaan la ciyaaro sannadka dambe, waana hubaal. Waa inaan sameynaa xilli ciyaareedka soo socda.”